Ntụgharị obi ụtọ na Tilal Liwa Resort | Samriddhi Bajpai Shukla
Ọhụụ dị na Tilal Liwa Resort
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at June 8, 2019
Nabh & mama
Kwa ụbọchị is ịmụta ihe ọmịiko
Mgbe ịhụnanya dị na mbara igwe nke Arabian Deserts: Ọhụụ ịhụnanya na Tilal Liwa
Ndị mmeri na Sunny ala nke UAE ị bara uru ichere, ihu igwe dị ịtụnanya & ikuku na-ajụ oyi iji mee ka obi dị gị mma. Maka ndị si n'akụkụ ụwa oyi kachasị njọ, ọ nwere ike ịdị ka oge ọkọchị ma ndị ọwụwa anyanwụ na-ahụ ebe ha na-anwụ anwụ n'ụsọ osimiri, na-ekpori ndụ na mbara ọzara na ndị a Sandjá Arabs.
Ọhụụ ịhụnanya na Tilal Liwa
Ọ bụ n'ezie ahụmahụ pụrụ iche mgbe di m tụrụ m n'anya na a nleta na Tilal Liwa nkwari akụ, nso ụwa kasị ukwuu sand dunes ... OZI NKE LIWA.
#Bụ #expats na UAE, anyị na-eme atụmatụ ịbanye n'ụlọ anyị na akụkụ nju oyi nke mba ahụ ma ọ bụ ebe a na-achọkarị ụsọ mmiri, mana mkpụrụ akụ a zoro ezo na nnukwu ụlọ Liwa abụghị obere! Ọ bụrụ n’ịgabeghị ụdị ndị a ebe, mgbe ahụ ntụrụndụ Desert bụ ihe achọrọ maka ndị winters maka oge a.
Nleta ikpeazụ anyị enweghị ike ịga maka oge ezumike kwesịrị ekwesị, ya mere, anyị mere atụmatụ maka #staycation nke bụ nnọọ ihe n'etiti #UAEexpats. Anyị na-edekọ ihe nkiri ịhụnanya na ụlọ nkwari akụ Danat, ọ dịkwa ụtọ .. !!! Ọ bụ ebe a na-eche na ọ dị oké ọnụ ahịa nke ndị Arab, oge ezumike na ntụrụndụ n'otu oge ahụ! Gụọ na ịmara ihe mere ...
Mụ na nwa m nwoke na-eme ụbọchị ọmụmụ ụbọchị 4 ụbọchị, n'ihi ya, ọ bụ onyinye pụrụ iche site na di m nye anyị abụọ. Anyị nabatara ọmarịcha Chocolate fudge achicha & na ụlọ Champagne, ọkụ na ihe ndozi nke ụlọ ahụ bụ nnọọ zuru okè!
Ime ụlọ ahụ na Tilal Liwa Resort bụ nnọọ zuru okè!
Ejiri okooko osisi na-eme ụlọ ahụ mma, ngwugwu a ga-echetara gị njem njem ezumike gị, ịhụnanya ụmụ nnụnụ na-eji akwa akwa akwa, ume na-enye ume ọhụrụ Oud enwere ike inwe ezi uche mgbe anyị rutere, ogige ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọdọ mmiri na-adịghị agwụ agwụ na-ele anya na nke ahụ bụ nnọọ ihe mara mma na enweghị ike ichetụ n'echiche ma ọ bụrụ na ị bụghị UAE ruo ugbu a.
Mgbe anyị na-eme njem ncheta, anyị na-aga n'èzí ... e nwere ọtụtụ mkpofu ájá mgbe ọ bụla ọdọ mmiri ahụ gwụrụ ma m ghaghị ikwu, ọ dịtụghị mgbe m chere na ájá ga-adọrọ mmasị nke ukwuu!
Tupu anyị aga nri abalị kandụl kandụl anyị, anyị nwalere ụbụrụ ụbụrụ anyị na nnukwu chessboard ... enwere ọtụtụ ihe maka nwa anyị nwoke! Obere ụmụaka nwere ike ịnụ ụtọ mpaghara ime ụlọ ụmụaka, ebe egwuregwu dị n'èzí nwere trampoline wdg. enwerekwa nri maka ụmụaka na ndị okenye dị ka hockey ikuku, tebụl tebụl, oche egwuregwu badminton wdg, enwere ọtụtụ nhọrọ egwuregwu egwuregwu dị ka Egwuregwu anọ na-agba ígwè, sandboarding, Camel rides na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka toro eto, ị nwere ike ịhọrọ site na listi ihe nchịkọta njem ezinụlọ & ị gaghị akwa ụta.
Nri Anyasị Na Dubai
N'anyasị mgbe anyị na-agbagharị na ájá dị mma, anyị họọrọ ịga igwu mmiri n'ọdọ mmiri na-adịghị agwụ agwụ, anyị enweghị agụụ mgbe ọ bụla, anyị kpebiri ịga n'ụlọikpe Layali ma nwee obi ụtọ na-agba ndụ (oge ọ bụla, amalite 8 PM , kwa ụbọchị) na ịgba chaa chaa tanoura (nke a bụ ebe na hotel nke na-ejekwa Shisha ozi).
N'ikpeazụ, ọ bụ oge maka nri abalị anyị ... ha na-enye gị 2 nhọrọ, ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ma ọ bụ na ị nwere ike ịnụ ụtọ ya na ụlọ nkwari akụ (anyị họọrọ nke ikpeazụ iji zere ọgbaghara) enwere ọtụtụ ụdị nri ndị anaghị eri anụ dịka non veg, salads & desserts bụ ihe ịtụnanya! Ọzọ ị ga-enweta ọrụ Red ma ọ bụ mmanya mmanya ị họọrọ (na ngwugwu nke anyị nyere)
Ọ bụ ebe a na-echeta ... na site na abụ uri si Henry Wadsworth, Aga m echeta mgbe nile Iche ụra na Arabian sand!
Ajuju uhie uhie, site na kpoo ọkụ
Nke Arab deserts ada,
N'ime iko a na-aghọ onye nledo nke oge, onye ozi nke echiche
Afọ ole ka agwụla
Banyere ihe ndị a na-akụ!
Ego ole ka ha huru,
Ole akụkọ ole a maara!
Obi ụtọ na-eme njem!
Liwa Oasis, Abu Dhabi dị nso na 250 km site na isi obodo ahụ, gbatịrị agbatị mpaghara 650,000km² ma tụọ 1,000km n'ogologo site na 500km n'obosara. Ọ nwere Saudi Arabia, Oman & Yemen n'akụkụ nke ọzọ nke ókè-ala ya
Bedouin bi na ogbe mmiri nke Liwa (Bani Yas) na-agbanye ala, mmiri mmiri na-eme iji zụlite ụbọchị na, n'ihi ya, ọtụtụ obodo na ebe obibi dị na Liwa n'oge 15th na 16th narị afọ. Liwa bụ ebe omumu nke ndi Nahyan, ezinụlọ nke ugbu a bụ Abu Dhabi na UAE, nke, n'oge ahụ, bụ onyeisi ezinụlọ nke Bani Yas ebo
Soro: Samriddhi Bajpai Shukla
Ụlọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezi nduzi maka Ọrụ n'ime Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, site na nke a, ị nwere ike nweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.